Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Wasiirka arrimha Dibadda Kuweiyt oo jeediyay Khudbado aan caadi aheyn - Wargeyska Faafiye
Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Wasiirka arrimha Dibadda Kuweiyt oo jeediyay Khudbado aan caadi aheyn
Iyadoo uu maanta kulan Xasaasi ah ka dhacay Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo baxaayo warar ku saabsan kulankaasi oo ahaa mid u dhexeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, Ra’isul Wasaare C/weli iyo Wafdi ka socday Jaamacadda Carabta.
Kulanka oo socday dhowr saac ayaa waxaa looga hadlay Amaanka, Hormar,a dhaqaalaha iyo arrimo kale, iyadoona waftiga uu ahaa waftigii ugu heer sareeyay ee soo gaaraya Muqdishu tan iyo markii la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xassan oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu ugu horeyntii amaanay wadamada Carabta iyo sida ay u caawinayaan Dowlada Federaalka ah ee Somalia, waxa uuna si gaar ah u xusay in Safaaradaha Wadamada Carabta ku leeyihiin Somalia ay si gaar ah ula socdaan xaalada dalka.
Sidoo kale, Madaxweyne Xassan ayaa waxa uu sheegay in kulankooda uu qeyb ka ahaa wada shaqeynta Soomaaliya iyo dowladaha carabta sanadka cusubna la qaban doono shir jaamacadda Carabta ay u qabaneyso Soomaaliya oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ku saabsan horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Hadalka Madaxweyne Xassan, ayaa waxaa xigay hadal uu R/wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimha Dibadda dalka Kuweiyt Sheekh Sabaax Khaalid Xaamid Al Sabaax ka jeediyay Xarunta waxa uu isna dhankiisa ka sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dalka Soomaaliya uu dib ula soo laabtay bilicdiisa.
Waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in muqdisho ay soo booqdaan ayna diyaar u yihiin caawimaada dadka iyo dalka.
Sheekh Sabaax Khaalid Xaamid Al Sabaax waxa uu ballan qaaday in Booqashadooda aysan halkaasi kusii ekaan doonin islamarkaana ay il gaar ah ku heyn doonaan xaaladaha dalka.
Si kastaba ha ahaatee, Wafdigani Booqashada ku imaaday Magaalada Muqdish, ayaa waxa ay ka soo kicitimay magaalada Khartuum ee dalka Suudan.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsKenya and Somalia vow to eliminate Al-shabaab, Al-Qaida.Turkish prosecutor launches investigation into Somali attack.50 askari Shabaab ah oo “ku biiray” A/SunnaOBAMA Adeerkiis oo Cabsi ka Qaba in La TARXIILO haduu Guleeysto ROMNEY.Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo wada qorshooyin aan raali galin doonin R/wasaaraha (Warbixin)